Izixhobo zobunjiniyela bamandla neFektri yezinto | I-china Izixhobo zobunjiniyela bamandla kanye nezinto zokwakha Abakhiqizi, abahlinzeki
ikhebula eliphansi noma eliphakathi neliphezulu elihamba ngenqwaba yomqhubi we-aluminium ABC ikhebula elingaphezulu
I-Aerial Bundle Conductor (ikhebula le-ABC) ngumqondo omusha kakhulu wokusatshalaliswa kwamandla ngaphezulu uma kuqhathaniswa nohlelo olujwayelekile lokusabalalisa umqhubi ongenalutho. Inikela ngezinga eliphakeme lokuphepha nokuthembeka, ukulahleka kwamandla okuphansi kanye nomnotho wohlelo lokugcina ngokunciphisa ukufakwa, ukugcinwa kanye nezindleko zokusebenza. Lolu hlelo lulungele ukusatshalaliswa kwezindawo zasemakhaya futhi luphelele ikakhulukazi ukufakwa ezindaweni ezinzima ezifana nezindawo ezinamagquma, izindawo ezingamahlathi, izindawo ezisogwini njll.
Izintambo zikagesi ze-PVC (intambo yamandla epulasitiki) ingenye yemikhiqizo esezingeni eliphakeme yenkampani yethu. Umkhiqizo awunawo amandla kagesi amahle kuphela, kepha futhi unokusimamiswa okuhle kwamakhemikhali, ukwakheka okulula, okulula ukusebenziseka, nokufakwa kwekhebuli akunqunyelwe ukuwa. Isetshenziswa kabanzi kusifunda se-transformer esilinganise i-voltage engu-6000V noma ngaphansi.
1. Isethi yokusetshenziswa kukaJenereta yensimbi esezingeni eliphakeme ingumbhalo wokujiya - 2MM kuye ku-6MM.
2. Ifakelwe izinto ezinamandla ezimunca umsindo - ukuqina komsindo, ukuvimba umlilo.
3. I-Generator ifakwe ibhethri engu-12V / 24V DC eneshaja, ibhethri lixhuma ucingo.
4. I-Generator ifakwe ithangi likaphethiloli lamahora ayi-10-12 elinenkomba kaphethiloli, isikhathi eside sokusebenza.
Uchungechunge lwekhabethe lokusatshalaliswa kwamandla lufanelekile i-AC 50 Hz, ikalwe amandla kagesi afinyelela ku-0.4 KV amandla wokudlulisa nokusabalalisa uhlelo. Lolu chungechunge lomkhiqizo luyinhlanganisela yesinxephezelo esizenzakalelayo nokusatshalaliswa kwamandla. Futhi kuyinto entsha ngaphakathi nangaphandle ingcindezi yokusabalalisa ikhabethe lokuvikelwa kokuvuza kagesi, amandla kagesi, ngaphezulu kwamanje, ukuvikelwa kwesigaba esivulekile. Inezinzuzo zevolumu encane, ukufakwa okulula, izindleko eziphansi, ukuvimbela okuntshontshiwe ugesi, ukuzivumelanisa nezimo okuqinile, ukumelana nokuguga, i-Rotor enembile, akukho phutha lesinxephezelo, njll.